Faragalinta Farmaajo ee guddiga doorashada beelaha Banaadiriga | KEYDMEDIA ONLINE
Faragalinta Farmaajo ee guddiga doorashada beelaha Banaadiriga
Villa Soomaaliya ayaa faragelin ku haysa doorashada Guddoomiyaha iyo Guddoomiye kuxigeenka Guddiga Doorashada Beelaha Banaadiriga, kuwaas oo shalay lagu waday in lagu doorto Muqdisho hayeeshee dib u dhacay.
MUQDISHO, Soomaaliya - Macluumaad ay heshay Keydmedia Online ayaa sheegaysa in dib loo dhigay doorashada, kadib markii uu soo farageliyay xafiiska Farmaajo, oo la sheegayo in uu wado shaqsiyaad isaga taageersan, taas oo la isku fahami waayay.
Odayaasha iyo waxgaradka beesha, ayaa codsaday in Gudiga Farsamada ee uu magacabay Ra’iisul Wasaaraha Xil-gaarsiinta ay soo farageliyaan arrintaan, oo ay wax ka qabtaan faragelinta ay Villa Soomaaliya ku hayso doorashada Beelaha Banaadiriga, waxayna dalbadeen in loo madax bannaaneeyo arrimahooda doorashooyinka.
Farmaajo oo ku caanbaxay in uu baalmaro nidaamka awood qaybsiga ee ka jira Soomaaliya ayaa la sheegayaa in uu wato shaqsiyaad aanba ka soo jeedin beeshaan, islamarkaana uu doonayo in uu talada iyo xaqa beesha u faramaroojiyo reer kale.
Guddiyada doorashada ee maamul goboleedyada oo maalmihii la soo dhaafay guddoomiyayaal loo doortay ayaa la sheegayaa in Farmaajo uu ku lug-lahaa oo shaqsiyaad uu isaga wato ay ku soo baxaeen, taas oo ay walaac ka muujiyeen saamilayda siyaasadda Soomaaliya.
Maanta ayaa lagu wadaa iney dhacdo doorashada gudoonka maamulaya doorashada Beelaha Banadiriga kuwaa oo xitaa kuraas badan aan ku laheyn Golaha Shacabka iyadoo isha lagu wada hayo shaqsiyaadka la dooran doono.